Log in ၀င်မရပါ — MYSTERY ZILLION
Log in ၀င်မရပါ
November 2008 edited October 2009 in Project
၁ လလောက် အပြင်ရောက်နေတာနဲ့ MZ edu အခု log in ၀င်မရပါခင်ဗျား။ ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲ။ အသစ်ပြန်လုပ်ရမည်ဆိုလဲ email တူနေတော့ ဆက်မသွားပါ။ တစ်ခြား email နဲ့ လုပ်ရမလားခင်ဗျား။
ရပါတယ် ကိုနိုင်၀င်းထွန်း ခင်ဗျား... ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ တစ်ခုခုမှားနေတာကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
password ရောမှန်ပါရဲ့လား။ အကူအညီလိုရင်ပြောပါခင်ဗျား။
အရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူး .... မမှတ်မိတော့ဘူးဗျ။ ကျေးဇူးပြုပြီး ကျနော့ email ထဲ ပြန်ထည့်ပေးလို့မလား။ နောက်ဆုံး၀င်ခဲ့တုန်းက လိုင်းမကောင်းဘူး။ အဲဒါ error တက်ပြီး mail ထဲမှာ တစ်ခြားလူ၀င်သုံးနိုင်တယ်ဆိုပြီး စာရောက်နေသေးတယ်။ ဒီကတည်းက ၀င်လို့မရတာ။
အသစ်ပြောင်းပြီးတော့ ... ကျနော်လည်းဝင်မရလို့ ... အသစ်ပြန်လုပ်လိုက်ရတယ်
:)edu mysteryzillion ဆိုရင်တော့ register အသစ်ပြန်လုပ်လိုက်တာ ကျွန်တော်တော့အဆင်ပြေသွားတယ်..register အသစ်ပြန်လုပ်ကြည့်ပါလား..
mz login ဝင်မရတာတော့ဘာကြောင့်လို့ ကျွန်တော်လည်းမသိဘူး..ကျွန်တော်ဖြစ်ဘူးတယ်..
၀င်လို့မရသူများ အရင် register လုပ်ခဲ့တဲ့ နာမည် နဲ့ အရင် email ကိုပြန်သုံးပြီး register ပြန်လုပ်လိုက်ပါ...ရပါတယ်။
ဟုတ်ဘူးလေး ကိုရသာ အခုပြောနေကြတာ MZ Edu ကိုပြောနေကြာတာဗျ။ အစ်ကိုပေးတာက MZ ဖိုရမ်အတွက်လေ။ အဲဒါက MZ Edu အတွက်ရောသုံးလို့ရလို့လား?
ကျွန်တော့်အကောင့်ကတော့ ဘာမှမဖြစ်ဘူးဗျ..၀င်လို့ရတယ်...ကိုယ်တိုင်မမှတ်နိုင်လို့ စက်ကို password & Username မှတ်ခိုင်းထားတာလေ...အဲဒါတော့ ကောင်းကောင်း၀င်လို့ရတယ်..:)
ကိုညလေး အရင်တုန်းက ဟာနဲ့တော့ ရတယ်ဗျ... ကျတော် နောက်ပိုင်းပြန်ပြင်ထားတဲ့ဟာ ကိုတော့ ကျောင်းတောင်ပြန်မအပ်ရသေးဘူး ဟီး...(ကြိုးစားတာ...):D:D:D အရင်တုန်းက EDU ကိုရော ဖိုရမ်ကိုပါ ကျတော် အဲ့ဒါလေး notepad ထဲကူထားပြီး သမနေတာရတယ်ဗျ....နောက် ပြင်ထားတဲ့ ဟာတော့ မစမ်းရသေးဘူး ဟီး....ကျောင်းအပ်လိုက်ဦးမယ်....:D:D:D
ဆိုင်လားတော့မသိဘူး... ဒီနေရာမှာဘဲ ရေးလိုက်..အဲ မေးလိုက်မိပြီ..ခွင့်ပြုကြပါနော်.....
forums မှာတော့ မြန်မာလိုဖတ်လို့ရပြီး Edu မှာ မြန်မာစာနေရာမှာ ?? တွေဘဲမြင်နေရလို့.....
:5: Edu မှာ သည်နေ့၀င်တော့ မြန်မာစာကောင်းကောင်းဖတ်လို့ ရသွားပါပြီခင်ဗျား.....
ကျေးဇူးတင်ပါသည်ခင်ဗျား......... :79: :79: :79:
ကျွန်တော်တော့ http://edy.mysteryzillion.org ဆိုပြီးတော့၀င်တော့လည်း
မလိုပါ။ မည်သူမဆို လွတ်လပ်လျင်မြန်စွာ လေ့လာသင်ယူနိုင်ရန် ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ထားပါသည်။ စာမေးလိုလျှင် ညာဘက်ထောင့် အပေါှဆုံးရှိ စာမေးရန်တွင် နှိပ်ပြီး မေးနိုင်သည်။